striatum တွင် phasic dopamine အချက်ပြမှုလျော့နည်းလာခြင်းကြောင့်ကိုကင်းအလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုသည်ရလဒ်များ (Your Brain On Porn)
အဆိုပါ striatum အတွက်အချက်ပြယုတ်လျော့ phasic dopamine (2014) မှအလွန်အကျွံကင်းအသုံးပြုမှုရလဒ်များကို
နတ် neuroscience ။ စာရေးသူလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်; PMC 2016 ဇန်နဝါရီ 15 အတွက်ရရှိနိုင်ပါ။
နတ် neuroscience ။ 2014 မေလ; 17 (5): 704-709 ။
2014 ဧပြီ6အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1038 / nn.3694
INGO Willuhn,1,2,3,* Lauren အမ် Burgeno,1,2 ပတေရုသအေ Groblewski,2 နှင့် ရှင်ပေါလု EM Phillips က1,2
ဝေဖန်ချက်ကိုကြည့်ပါphasic dopamine အချက်ပြ၏ဆုံးရှုံးမှု: သစ်တစ်ခုစွဲအမှတ်အသား"၌ နတ် neuroscienceစာမျက်နှာ 17 အပေါ်အသံအတိုးအကျယ် 644 ။
မူးယစ်ဆေးစွဲမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမြင့်တက်နေဖြင့်မှတ်သားတဲ့အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ventromedial striatum (VMs) တွင် Dopamine neurotransmission နှိပ်စက်မူးယစ်ဆေးစူးရှအားဖြည့်သက်ရောက်မှု mediates, ဒါပေမယ့်အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးအသုံးပြုမှုကိုအတူ dorsolateral striatum (DLS) မူးယစ်ရှာထိန်းချုပ်ယူဆထင်နေသည်။ ကျနော်တို့ကြွက်များတွင်မူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေ၏တင်းမာမှုလျှော့ချထုတ်လုပ်တဲ့ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး regimen စဉ်အတွင်း striatal dopamine လွှတ်ပေးရန်တိုင်းတာ။ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကျနော်တို့ကိုကင်းစားသုံးမှုနှုန်းတိုးမြှင့်အဖြစ် phasic dopamine နှစ်ဦးစလုံးဒေသများတွင်လျော့နည်းသွားကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့; အဆိုပါ VMs အတွက် dopamine အတွက်လျှော့အတူသိသိသာသာတင်းမာမှုနှုန်းဆက်နွယ်နေကြောင်း။ အဆိုပါ VMs အတွက် dopamine အချက်ပြစည်ပင်တစ်ခုထိုးမှာ dopamine ရှေ့ပြေး L-DOPA ၏အုပ်ချုပ်ရေးအားဖြင့်လျော့နည်းသွား dopamine ဂီယာနှင့်အလွန်အကျွံမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအကြားကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဆက်ဆံရေးဟာသရုပ်ပြ, တင်းမာမှုကိုပြောင်းပြန်လုပ်လိုက်တယ်။ ထို့ကြောင့်အတူတကွသည်ဤဒေတာအလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးအသုံးပြုမှုကိုအောက်ပါပေါ်ထွက်လာသောအလွန်အကျွံမူးယစ်စားသုံးမှုသို့ mechanistic နှင့်ကုထုံးထိုးထွင်းသိမြင်သည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအနီးကပ် striatum အတွက် dopamine များလွှတ်ပေးရေးနှင့်ဆက်စပ်နေသည်1,2။ သို့သော် dopamine neurotransmission အတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု-related အပြောင်းအလဲများကိုကြာချိန်နှင့်မဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်းအတွက်ကွဲပြား3-5။ ကိုကင်းအပါအဝင်အလွဲသုံးစားမှုအများအပြားမူးယစ်ဆေးများကနှိုးဆွပေးသည့် ventromedial striatum (VMs) တွင် dopamine ၏ extracellular အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်အနှေးတိုး,6မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အားဖြည့်ဂုဏ်သတ္တိများရောင်ပြန်ဟပ်မှယူဆနေကြသည်7, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပတ်ဝန်းကျင် dopamine အာရုံစူးစိုက်မှုတစ်ခုမြင့်မားသောအဆင့်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အလို့ငှာကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးသူတို့ရဲ့နှုန်းကိုထိန်းညှိအဖြစ်8။ အဆိုပါ VMs အတွင်းမှာပဲသည်နျူကလိယ accumbens ၏ core နဲ့ shell ကိုငျဒသေအတွက် dopamine အချက်ပြ၏ထပ် putative အခန်းကဏ္ဍအစီရင်ခံခဲ့ကြပေမယ့်အဓိကမူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်ဖြန်ဖြေများအတွက် shell ကိုတခုတခုအပေါ်မှာအလေးထားခြင်းနှင့် conditional အားဖြည့်ဘို့တစ်အလွှာအဖြစ်သရုပ်ဆောင်များအတွက်အဓိကနှင့်အတူ1။ အမှန်မှာထိုနျူကလိယအတွက် phasic dopamine လွှတ်ပေးရန်အဓိက accumbens, စက္ကန့်အနည်းငယ်တည်တံ့, အကြိမ်ကြိမ်မူးယစ်ဆေးနှင့်အတူတွဲခဲ့ကြကြောင်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှု၏တင်ဆက်မှုမှအေးစက်နေသည်9-12 နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာထိန်းချုပ်ထားခြင်းနှင့်ယူနိုင်စွမ်း9။ dopamine လွှတ်ပေးရန်အားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သော conditional လှုံ့ဆော်မှုများ၏ encoding ကလည်း striatum (dorsolateral striatum, DLS) ၏ sensorimotor ရှုထောင့်၌တွေ့ရှိပါသည်13, လေ့နှင့် compulsive မူးယစ်ဆေးရှာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုတစ်ဦး striatal မဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်ကြောင်း14-16။ ထို့ကြောင့်အပန်းဖြေအသုံးပြုမှုကိုကျော်လွန်ပြီးယူပြီးမူးယစ်ဆေးများ၏တိုးတက်မှုကွဲပြားခြားနားသော striatal ငျဒသေအတွက် dopamine အချက်ပြ၏ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုထင်ဟပ်ဖို့စဉ်းစားသည်1,17တည်ထောင်မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစဉ်အတွင်း sensorimotor (DLS) striatum ဖို့ limbic (VMs) မှပြောင်းကုန်ပြီတစ်ခုအလေးပေးနှင့်အတူ1,18။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ phasic dopamine ပြောင်းလဲမှုများကိုအားဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သည့်လုပ်ရပ်များသို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်မှုများ encoding ကအလယ်အလတ်မူးယစ်ဆေး-ဆည်းပူးနေအမူအကျင့်ကိုအရှိန်အဖြစ်ရှိမရှိမသိရသည်။
အလယ်အလတ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကနေအကူးအပြောင်း addiction ဖို့အကောင်းဆုံးမော်ဒယ်မှယူဆသည်ဟုကြွက် Paradigm မူးယစ်ဆေးဖို့အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး access ကို employ19,20ထိုကဲ့သို့သောရက်သတ္တပတ်၏အကာလအတွက်တစ်နေ့လျှင်ခြောက်နာရီ (ရှည်လျားသော access ကို, LgA) ကိုတဦးတည်း (အတို access ကို, SHA) မှ access ကိုသက်တမ်းတိုးရေးအဖြစ်21။ ထိုသို့သောမူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေး regimen ဆိုးရွားလာခဲ့သည်ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း21 နှင့် compulsive မူးယစ်ဆေးရှာ22လူသားများအတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုသွင်ပြင်လက္ခဏာများအခြား Cardinal ရောဂါလက္ခဏာတွေအကြား23။ ဤတွင်ကျနော်တို့ယခင်ကတည်ငြိမ် Sha မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုစဉ်အတွင်းသွင်ပြင်လက္ခဏာဟာ striatum အတွက်အချက်ပြ phasic dopamine ၏ဒေသဆိုင်ရာဒိုင်းနမစ်အပေါ်သက်ရောက်မှုဘယ်လောက် LgA ကင်းရန်စမ်းသပ်ပြီး13 မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏တင်းမာမှုအခြေခံသည့် neurobiological ယန္တရားများ၏ပိုကောင်းတဲ့ comprehension ရဖို့ရန်။
indwelling သွေးကြောသွင်းပြွန်နှင့်အတူအထီး Wistar ကြွက်နေ့စဉ် Sha အစည်းအဝေးများကာလအတွင်း Self-စီမံခန့်ခွဲကင်းဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းနှင့်ဝယ်ယူနှစ်ခုနှာခေါင်း-Poke ဆိပ်ကမ်းများတပ်ဆင်ထားအခန်း LgA အစည်းအဝေးများမှ switched ခဲ့ကြသည်အောက်ပါခဲ့ကြသည်။ တက်ကြွစွာဆိပ်ကမ်းကို (0.5 / ကီလိုဂရမ် / ပြုတ်ရည် mg) ကိုကင်းတစ်ခုပြုတ်ရည်ရူးနှမ်းနှင့်အားဖြည့်တစ်ဦး fixed-ကြားကာလ (FI) 20 အချိန်ဇယားအပေါ်တစ်ဦးအလင်း-သေံလှုံ့ဆော်မှု၏ 20-s ကိုတင်ဆက်သို့တစ်ဦးကနှာခေါင်းပြီးမှ။ ဒုတိယ (မလှုပ်မရှား) နှာခေါင်း-Poke ဆိပ်ကမ်း, ဒါမှမဟုတ်လှုံ့ဆော်မှုတင်ဆက်မှု (20-s ကိုအချိန်ထွက်) အတွင်းတက်ကြွစွာဆိပ်ကမ်းတုံ့ပြန်ချက်, ပရိုဂရမ်အကျိုးဆက်မပါဘဲခဲ့ကြသည်။ အစီရင်ခံ၏ရည်ရွယ်ချက်, နှာခေါင်းမလှုပ်မရှား "အဖြစ်အချိန်ကိုထွက်ကာလ (ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးကိုကင်းပြုတ်ရည်ရူးနှမ်းသောသူတို့ကို) ထဲကအချိန်အပြင်ဘက်" တက်ကြွသောနှာခေါင်း Poke "ကိုရည်ညွှန်းနှင့်မလှုပ်မရှားဆိပ်ကမ်း၌သူတို့အားနေကြသည်ကာလပြင်ပတက်ကြွဆိပ်ကမ်းတုံ့ပြန်မှုပြီးမှ နှာခေါင်း "pokes ။ : တက်ကြွနှာခေါင်းအရေအတွက်မလှုပ်မရှားနှာခေါင်း Poke (နှာခေါင်း-Poke ဆိပ်ကမ်းအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုသိသိသာသာကျော်လွန် pokes F(1, 23) = 383.226, P <0.001; သဖန်းသီး။ 1) တစ်ဦးချင်းစီအပတ်အတွင်း (P <0.001) ။ SHA မှ LgA သို့ပြောင်းလဲပြီးနောက်အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းကိုကင်းပမာဏသည်သိသိသာသာမြင့်တက်လာခဲ့သည် (အပတ်၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု - F(3, 69) = 25.504, P <0.001; သဖန်းသီး။ 1), အဖြစ်တသမတ်တည်းအများအပြားအခြားသူများအစီရင်ခံ24.
dopamine ဂီယာ၏ရေရှည်ဒိုင်းနမစ်အကဲဖြတ်ရန်, longitudinal neurochemical အသံသွင်းနျူကလီးယပ်အတွက်တစ်ပြိုင်နက်ထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့ VMs ၏အမာခံ accumbens နှင့်နာတာရှည်ထဲထညျ့ microsensors မှာ DLS အတွက်25 အစာရှောင်ခြင်း-scan ကသိသိ voltammetry သုံးပြီး (ကြည့်ရှု နောက်ဆက်တွဲပုံ။ 1 ) လျှပ်ကူးပစ္စည်းနေရာချထား၏ histological စိစစ်အတည်ပြုသည်။ LgA ၏ပထမရက်သတ္တပတ်များတွင်ကျနော်တို့ (တက်ကြွစွာတုံ့ပြန်မှုအောက်ပါ VMs အတွက် extracellular dopamine အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်ယာယီတိုးလေ့လာတွေ့ရှိP <0.001; သင်္ဘောသဖန်း။ 2a) ။ activation ဒီပုံစံ (တတိယပတ်အတွင်း dopamine လွှတ်ပေးရေးကိုပထမဦးဆုံးမှာထက်သိသိသာသာပိုသေးရှိရာ LgA စဉ်အတွင်းငြင်းဆန်P <0.001) နှင့်ဒုတိယ (P = 0.030) ရက်သတ္တပတ် (ရက်သတ္တပတ်၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်: F(2,72) = 10.230, P <0.001; သင်္ဘောသဖန်း။ 2b) ။ အဆိုပါ DLS အတွက် Phasic dopamine လွှတ်ပေးရေး (ဒုတိယသီတင်းပတ်အတွင်းထွက်ပေါ်လာP = 0.006; သင်္ဘောသဖန်း။ 2c) ဒါပေမယ့် LgA ၏တတိယပတ်အတွင်းရက်သတ္တပတ်၏ (အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုပျက်ကွက်ခဲ့: F(2,51) = 3.474, P = 0.039; ရက်သတ္တပတ်အပြန်အလှန်×တက်ကြွ Poke: F(2,51) = 4.021, P = 0.024; သင်္ဘောသဖန်း။ 2c, ဃ) ။ ဤရွေ့ကားဒေတာ VMs နှင့် DLS အတွက် phasic dopamine အချက်ပြမှုများကိုကျွန်တော်တစ်ဦး Sha regimen များအတွက်အစီရင်ခံအရာကိုအလားတူမူးယစ်ဆေးဝါးယူပြီး၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်မှာဆင့်ကဲပေါ်ထွက်လာကြောင်းပြသ13။ သို့သော်ဤအချက်ပြ LgA ကြောင့်သွေးကြောသွင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုကင်းများ၏ pharmacokinetics မပြောင်းပါဘူးသိရသောအုပ်စိုးမှုကာလ၏သင်တန်းကျော်နှစ်ဦးစလုံးဒေသများတွင်လျော့26,27.
ရက်သတ္တပတ်၏သင်တန်းကျော် VMs နှင့် DLS အတွက်အချက်ပြ Dopamine
dopamine အချက်ပြနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏တင်းမာမှုများဆုံးရှုံးခြင်းတို့အကြားဆက်ဆံရေးကိုစမ်းသပ်ဖို့ကျနော်တို့ကိုသူတို့ linear အပေါ်မှာအခြေခံသိသိသာသာတင်းမာမှုပြခြင်းရှိမရှိပေါ်တွင်မူတည်အုပ်စုနှစ်စုသို့တိရိစ္ဆာန်များခွဲထုတ်အားဖြင့် LgA regimen ကာလအတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါး Self-အုပ်ချုပ်ရေးမြင့်လာမှလွယ်ကူစွာထိခိုက်အတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု၏အားသာချက်ကိုယူ LgA အစည်းအဝေးများသို့မဟုတ်မကျော်မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုဆုတ်ယုတ် (သင်္ဘောသဖန်း။ 3a, ခ) ။ : တိရစ္ဆာန်များ၏ဤခြားနား validation Non-ဆိုးရွားလာခဲ့သည်တိရိစ္ဆာန်များ (LgA ၏သုံးပတ်၏သင်တန်းကျော်ရက်သတ္တပတ်၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်တက်ကြွနှာခေါင်း Poke မရှိသိသိသာသာတိုးပြသရုပ်ပြ F(2,18) = 0.633, P = 0.542; သင်္ဘောသဖန်း။ 3b, လက်ဝဲဘက်), ဆိုးရွားလာခဲ့သည်ကြွက်သော်လည်း (သိသိသာသာရက်သတ္တပတ်၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုဟာသူတို့ရဲ့စားသုံးမှုတိုးပွားလာ: F(2,26) = 14.826, P <0.001; သင်္ဘောသဖန်း။ 3bညာဘက်; ရက်သတ္တပတ်အပြန်အလှန်×စားသုံးမှု: F(2,44) = 4.674, P = 0.014) တတိယ LgA ပတ်အတွင်း Non-ဆိုးရွားလာခဲ့သည်တိရိစ္ဆာန်များထက်ပိုမိုတက်ကြွစွာနှာခေါင်း Poke အောင် (t(22) = 2.307, P = 0.031; သင်္ဘောသဖန်း။ 3b) ။ အထူးသ, (တစ်တိုးတက်သော-အချိုးတာဝန်အတွက်သရုပ်ပြအဖြစ်တိရစ္ဆာန်များ, ကိုကင်းရရှိရန်တစ်ခုတိုးလာလှုံ့ဆျောမှုပြသတိုက်ပွဲတွေအရှိန်မြင့်လာP = 0.028; နောက်ဆက်တွဲပုံ။ 2) ။ ဆိုးရွားလာခဲ့သည်ကြွက်များမှာ VMs အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက်သိသာထင်ရှားသောကျဆင်းမှု (ရက်သတ္တပတ်၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည်: F(2,51) = 15.507, P <0.001; သင်္ဘောသဖန်း။ 3cညာဘက်နှင့် နောက်ဆက်တွဲပုံ။ 3a) ။ သို့သော် VMs dopamine လွှတ်ပေးရေး (Non-ဆိုးရွားလာခဲ့သည်ကြွက်များတွင်ရက်သတ္တပတ်၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်တည်ငြိမ်ခဲ့: F(2,18) = 0.057, P = 0.945; သင်္ဘောသဖန်း။ 3c, စွန် နောက်ဆက်တွဲပုံ။ 4a) ဆိုးရွားလာခဲ့သည်ကြွက် (စားသုံးမှု၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်နှိုင်းယှဉ်တတိယပတ်အတွင်းသိသိသာသာပိုပြီး phasic dopamine ဆွေးနွေး: F(1,69) = 6.444, P =0။ 013; သင်္ဘောသဖန်း။ 3d, left; ရက်သတ္တပတ်အပြန်အလှန်×စားသုံးမှု: F(1,70) = 4.303, P = 0.042) ။ ဆိုးရွားလာခဲ့သည်နှင့် Non-ဆိုးရွားလာခဲ့သည်ကြွက်အကြား dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက်ဒီခြားနားချက် Self-အုပ်ချုပ်ရေး (t တစ်ခုလုံးကိုခြောက်နာရီတစ်လျှောက်လုံးထင်ရှားခဲ့သည်(43) = 2.599, P = 0.013) ။ အရေးကြီးတာက, ဒီခြားနားချက်ကိုကင်း၏ Non-ကဆက်ပြောပါတယ်, စမ်းသပ်-သွေးဆောင်တာဟာအောက်ပါ dopamine လွှတ်ပေးရန်အဖြစ်ဆိုးရွားလာခဲ့သည်တိရိစ္ဆာန်များအတွက် dopamine function ကိုတစ်ဦးယေဘုယျကျဆင်းမှုကနေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါဘူး (Non-ဆိုးရွားလာခဲ့သည်နှင့်ဆိုးရွားလာခဲ့သည်တိရိစ္ဆာန်များအကြားကွဲပြားဘူးP =0။ 605; နောက်ဆက်တွဲပုံ။ 5a).
မူးယစ်ဆေး-ယူပြီးအပြုအမူနှင့် striatal dopamine အချက်ပြခုနှစ်တွင်တစ်ဦးချင်းခြားနားချက်
Non-မြင့်တက်ကြွက်များ၏ VMs အတွက်ထိန်းသိမ်းထား phasic dopamine လွှတ်ပေးရန်မတူဘဲတှငျကြှနျုပျတို့ယခင်ကနေ့စဉ် session တစ်ခုနှုန်းတစ်ဦးတည်းသာထိုအချိန်နာရီကိုကန့်သတ်ကင်း access ကို (Sha) ၏သုံးပတ်ခံခဲ့ကြောင်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက်ကျဆင်းခြင်းရှိကွောငျးကိုအစီရင်ခံတင်ပြ13။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သ Sha သို့မဟုတ် LgA ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးခံခဲ့သောတိရိစ္ဆာန်များကိုဖြတ်ပြီး dopamine function ကိုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစားသုံးမှုအကြားဆက်ဆံရေးအသေးစိတ်စရိုက်လက္ခဏာတွေခွင့်ဤ Sha ကြွက်ထံမှရရှိသောဒေတာများအပေါ်နောက်ထပ်စမ်းသပ်မှုထွက်သယ်ဆောင်။ ယုတ်မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုသိသိသာသာတင်းမာမှု Sha စဉ်အတွင်းတိရိစ္ဆာန်များကိုဖြတ်ပြီးအဲဒီမှာမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်, SHA ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးသုံးပတ်ကျော်ကမူးယစ်ဆေးစားသုံးမှု၏သိသာထင်ရှားသောတင်းမာမှုပြတိရစ္ဆာန်များ၏အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင်နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားခြားနားမှု (6 ၏ 16) ရှိခဲ့သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာတည်ငြိမ်မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုထိန်းသိမ်းထားသူကိုတိရိစ္ဆာန်များ၏အုပ်စု Sha ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး၏တတိယပတ်အတွင်း VMs phasic dopamine (ဆိုလိုသည်မှာအရေးပါသောတင်းမာမှုပြခဲ့ပါဘူး) ၏တတိယပတ်အတွင်း Non-ဆိုးရွားလာခဲ့သည်တိရစ္ဆာန်များ၏ကနေသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမဟုတ်ခဲ့ LgA (P = 0.741; နောက်ဆက်တွဲပုံ။ 5b) ။ မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုအောက်ပိုင်းနှုန်းထားများပြ, သူတို့ရဲ့မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုဆိုးရွားလာခဲ့သည်ကြောင်း Sha တိရိစ္ဆာန်များ (32.7 ± 3.9 ပထမဦးဆုံးတစ်နာရီအတွင်း 43.9 ± 3.1 တာဟာနှိုင်းယှဉ်, P ကို ​​= 0.017) နှင့်လျော့နည်း attenuation dopamine လွှတ်ပေးရေး (P = 0.049; နောက်ဆက်တွဲပုံ။ 5b) LgA အခြေအနေများအောက်တွင်သူတို့၏စားသုံးမှုဆိုးရွားလာခဲ့သည်ကြောင်းတိရစ္ဆာန်များထက်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, ကြွက်မြင့်တက် Sha နှင့် LgA အကြားအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှသူတို့ရဲ့ Non-မြင့်တက် counterparts တွေကို (P = 0.094) ကိုနှိုင်းယှဉ်လျော့နည်းသွား VMs dopamine များအတွက် non-သိသိသာသာလမ်းကြောင်းသစ်နှင့် dopamine လွှတ်ပေးရန်မျှသိသာအပြန်အလှန်မျှစားသုံးမှု regimen အပြန်အလှန်× (ရှိ၏: F(1,57) = 0.111 P = 0.740; နောက်ဆက်တွဲပုံ။ 5b) ။ ထိုအဦးချင်းကွဲပြားမှုပေးထားကျနော်တို့ dopamine အဆင့်ဆင့်နှင့်တင်းမာမှုများ၏ဒီဂရီအကြားတိုက်ရိုက်ဆက်ဆံရေးကိုစမ်းသပ်ဖို့ Sha နှင့် LgA ကြွက်သားအပေါင်းတို့ကိုဖြတ်ပြီးဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထွက်ယူသွားနှင့် (Sha နှင့် LgA ကြွက်အတူတကွထို့နောက်ပါတီအသီးသီးမှသိသာထင်ရှားသောနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သောဆက်စပ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့; r = -0.628 , P ရက်သတ္တပတ် 0.005 အတွက်နိမ့်ဆုံး dopamine လွှတ်ပေးရန်ခဲ့တိရိစ္ဆာန်များအတွက်အကြီးမားဆုံးသောတင်းမာမှုနှင့်အတူ = 3) (သင်္ဘောသဖန်း။ 3e,) ထားခဲ့တယ်။ ထို့ကြောင့် VMs အတွက် dopamine အချက်ပြ၏ကို attenuation မူးယစ်ဆေး Self-administrationacross LgA နှင့် Sha မူးယစ်ဆေး-access ကို regimen ၏တင်းမာမှုများကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက်အပြောင်းအလဲများနှင့်ဆက်စပ်သောဂျာမန်ရှုထောင့်အစားသူတို့နှင့်ထိတွေ့ခဲ့ကြကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး regimen ထက်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တင်းမာမှုများလျော့ပါးစေရန်သို့မဟုတ်မရှိမရှိကြောင်းကိုဤရွေ့ကား data တွေကိုမီးမောင်းထိုးပြ se နှုန်း။ အလားတူပဲကျနော်တို့ (အားလုံးကြွက်များကိုဖြတ်ပြီး, တင်းမာမှုကိုကင်းဘို့တိုးမြှင့်လှုံ့ဆော်မှုများသိသိသာသာခန့်မှန်းကြောင်းကိုရှာဖွေP = 0.037, နောက်ဆက်တွဲပုံ။ 6aတစ်တိုးတက်သောအချိုးအချိန်ဇယားအတွက်အကဲဖြတ်ကဲ့သို့), ဒါပေမယ့် LgA / Sha regimen (မဟုတ်ပါဘူးP = 0.340, နောက်ဆက်တွဲပုံ။ 6b).
: အ VMs မတူဘဲခုနှစ်, DLS အတွက်တုန့်ပြန်-ဆက်ပြောပါတယ် dopamine လွှတ်ပေးရန်ဆိုးရွားလာခဲ့သည်နှင့် Non-ဆိုးရွားလာခဲ့သည် LgA တိရိစ္ဆာန်များ (စားသုံးမှု၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုများအကြားကွဲပြားဘူး F(1,48) = 0.472, P =0။ 496; သင်္ဘောသဖန်း။ 3dညာဘက်နှင့် နောက်ဆက်တွဲသင်္ဘောသဖန်းသီး။ 3b နှင့် 4b), မဟုတ်သလိုအဲဒီမှာ Sha သို့မဟုတ် LgA ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး (r = -0.112 ခံယူကြောင်းတိရိစ္ဆာန်များကိုဖြတ်ပြီးတင်းမာမှုများနှင့် dopamine လွှတ်ရာဆင်ခြေလျှောအကြားသိသိသာသာဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ခဲ့သည်, P = 0.649; သင်္ဘောသဖန်း။ 3eညာဘက်) ။ အဆိုပါ VMs အတွက် dopamine မူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေ၏တင်းမာမှုဆက်နွယ်နေကြောင်းသော်လည်းထို့ကြောင့်, အလားတူဆက်စပ်မှုဟာ DLS, ကျယ်ပြန့်တိုးချဲ့မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်တစ်ဦးနှောက်ဒေသတွင်း၌လေ့လာတွေ့ရှိမခံခဲ့ရ1,14,16,18.
neurochemistry နှင့်အပြုအမူအကြားကဒီလိုက်စားဆက်စပ်ပေးသောကျနော်တို့ phasic dopamine အချက်ပြအတွင်းကျဆင်းမှု, မူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေ၏တင်းမာမှုလျှော့ချထုတ်လုပ် dopamine-receptor ရန်ထုတ်လုပ်မူးယစ်ဆေးယူပြီးအတွက်တိုးကဲ့သို့ပင်နိုင်ငံရေးပါတီများကင်းမဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ခဲ့ကြောင်းတွေးဆ28-30, ဒါကြောင့် (ကတင်းမာမှုတစ်ဦးမှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်ထုတ်လုပ်မယ်လို့ restore ပြန်သင်္ဘောသဖန်း။ 4a) ။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သ (စက်လှေကားတိရိစ္ဆာန်များကုသP = 0.024; သင်္ဘောသဖန်း။ 4b) L-DOPA နှင့်အတူ session ကိုမှကြိုတင် phasic dopamine လွှတ်ပေးရန်တိုးမြှင့်ဖို့စတင်ရန်31။ : L-DOPA ထိုး-ရသည် (0, 10, 30 နှင့် 90 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်, သွေးကြောသွင်း) ကိုကင်းစားသုံးမှု (L-DOPA ၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုလျော့နည်းသွား F(3,53) = 5.053, P = 0.004; သင်္ဘောသဖန်း။ 4b), 30 မီလီဂရမ်နှင့်အတူ / pre-ဆိုးရွားလာခဲ့သည်အဆင့်အထိစားသုံးမှုပြန်လာကီလိုဂရမ်။ အရေးကြီးတာက, L-DOPA ၏ 30 mg / kg ဆေးထိုးလုံးဝ VMs အတွက် phasic dopamine အချက်ပြ restore လုံလောက်ခဲ့ပါတယ် (ကြည့်ရှု နောက်ဆက်တွဲပုံ။7မူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေစဉ်အတွင်းမှတ်တမ်းတင်က်ဘ်ဆိုက်များ) (များအတွက်F(2,8) = 6.316, P = 0.023; သင်္ဘောသဖန်း။ 4c), တစ်ဦးအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလည်း (Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပြည့်အဝကိုခြောက်နာရီကြာကြည့်ရှုလေ့လာF(2,8) = 7.610, P = 0.0141) ။ ထို့ကြောင့် VMs အတွက် phasic dopamine လွှတ်ပေးရန်၏ပမာဏတစ်ဦးကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး session တစ်ခုအတွင်းမှာမူးယစ်ဆေးစားသုံးမှု၏ပမာဏကိုခန့်မှန်း (r = -0.525, P = 0.046; သင်္ဘောသဖန်း။ 4d) ။ ဆက်ပြောပါတယ်မူးယစ်ပြုတ်ရည်ကိုအောက်ပါ VMs dopamine အတွက်နှောင့်နှေးအာရုံစူးစိုက်မှုအပြောင်းအလဲများက L-DOPA ကုသမှုအားဖြင့်ပြောင်းလဲမနှင့်, တကယ်တော့, အကျူးအကြားကွာခြားခဲ့ပါဘူးအဖြစ် L-DOPA ၏ဤအမူအကျင့်အကျိုးသက်ရောက်မှု, ကိုကင်းဖို့ pharmacological တုံ့ပြန်မှုပြောင်းလဲမှုများအားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့မရနိုင် တင်းမာမှုလျှော့ချ, တင်းမာမှု, နဲ့ L-DOPA-ကုသပြည်နယ်များဆိုးရွားလာခဲ့သည် (F(2,8) = 0.020, P = 0.980; နောက်ဆက်တွဲပုံ။ 8) ။ L-DOPA ဒေသအလိုက်အဆိုပါ VMs သို့ထုံမွှန်းအခါထို့ပြင်မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲမှုအပေါ် L-DOPA ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလည်း (ကြည့်ရှုလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည် နောက်ဆက်တွဲပုံ။9တစ်ဦး session တစ်ခု (t ကိုမှကြိုတင်ဆိုးရွားလာခဲ့သည်ကြွက်များ၏ပြုတ်ရည်က်ဘ်ဆိုက်များ) အတွက်(7) = 6.517, P <0.001; သင်္ဘောသဖန်း။ 4e) ။ အတူတူယူလေ့လာမှုများ၏ဤအစုကိုကြိုတင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲနိုင်ရန်အုပ်ချုပ် L-DOPA ၏တစ်ခုတည်းထိုး pre-ဆိုးရွားလာခဲ့သည်ပြည်နယ်မှ dopamine အချက်ပြခြင်းနှင့်ပုံမှန်ကင်းအသုံးပြုမှုကိုပြန်လည်အတွက်ထိရောက်သောကြောင်းပြသသည်။
L-DOPA လျှောက်လျော့နည်း VMs dopamine လွှတ်ပေးရန် replenishing နေဖြင့်မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုဆိုးရွားလာခဲ့သည်
ကျနော်တို့လာမယ့်လက်တွေ့ applications များပိုမိုသက်ဆိုင်ရာရေရှည်ထိုး regimen မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု, ဆိုးရွားလာခဲ့သည် L-DOPA ၏အသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချမှာထိရောက်သောလိမ့်မယ်ရှိမရှိစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ ပထမဦးစွာကျနော်တို့တင်းမာမှုများ၏ induction စဉ်အတွင်းရက်ဆက်တိုက်အပေါ် L-DOPA ၏ထပ်ခါတလဲလဲပြုတ်ရည်မိတ်ဆက်စမ်းသပ်ချက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ တိရစ္ဆာန်များ (သူတို့နှစ်ပတ် L-DOPA (သွေးကြောသွင်း 30 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်) သို့မဟုတ်ကြိုတင်တစ်ခုချင်းစီ session ကိုမှဆားနှင့်အတူထိုးသွင်းခဲ့ကြရသောအချိန်ကာလအတွင်း stably Self-စီမံခန့်ခွဲကင်းဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားပြီးတော့ LgA မှ switched သို့မဟုတ် Sha အပေါ်ကျန်ရစ်ဖြစ်စေခဲ့သည်သင်္ဘောသဖန်း။ 5a) ။ L-DOPA တစ် regimen-တိကျတဲ့ထုံးစံ (ကုသမှုအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုသိသိသာသာထိခိုက်နစ်နာမူးယစ်ဆေးစားသုံးမှု: F(1,53) = 9.297, P = 0.004; regimen ၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်: F(1,53) = 5.968, P = 0.018; သင်္ဘောသဖန်း။ 5a) လျော့နည်းသွားကင်းစားသုံးမှုနှင့်အတူ LgA တိရိစ္ဆာန်များအတွက် (P = 0.004), မဟုတ် Sha တိရိစ္ဆာန်များ (P = 0.170; သင်္ဘောသဖန်း။ 5a), နှင့်မလှုပ်မရှားနှာခေါင်း Poke (LgA အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိဘဲ P = 0.202; Sha, P = 0.101; မပြသဒေတာ) ။ ထို့ကြောင့် L-DOPA ကုသမှု LgA ကာလအတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏တင်းမာမှုကာကွယ်ပေးနိုင်မှာထိရောက်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်ကုသမှုချုပ်ရာအပျေါမှာ, ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှု (မခံနိုင်ဘဲခဲ့ဘူးP = 0.789; သင်္ဘောသဖန်း။ 5a) ။ ဒုတိယအကျနော်တို့ထပ်တလဲလဲမူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုဆိုးရွားလာခဲ့သည်ထူထောင်နှင့်အတူတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ရက်ဆက်တိုက်အပေါ် L-DOPA အုပ်ချုပ်။ တိရစ္ဆာန်များ stably ကင်း Self-စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်ခဲ့ကြသည်ဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်ဖြစ်စေ LgA မှ switched, ဒါမှမဟုတ်သုံးပတ်ကြာ Sha အပေါ်နျြရစျ။ ဤရွေ့ကားတိရိစ္ဆာန်များထို့နောက် (တတိယပတ်အတွင်းကြိုတင် Self-အုပ်ချုပ်ရေးအစည်းအဝေးများမှ L-DOPA သို့မဟုတ်ဆားနဲ့ကုသခဲ့ကြသည်သင်္ဘောသဖန်း။ 5b) ။ LgA-လေ့ကျင့်သင်ကြားတိရိစ္ဆာန်များ (SHA-လေ့ကျင့်သင်ကြားတိရိစ္ဆာန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပထမနှစ်ပတ်အတွင်းစဉ်အတွင်း regimen ၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကင်းသုံးစွဲခြင်းအတွက်သိသိသာသာတိုးပြသခဲ့သည်: F(1,51) = 15.706, P <0.001; ဒေတာကိုမပြပါ။ L-DOPA ကုသမှုသည်ပုံမှန်ကုသမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ F(1,51) = 5.303, P = 0.025; regimen ၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်: F(1,51) = 11.884, P = 0.001; သင်္ဘောသဖန်း။ 5b), LgA တိရိစ္ဆာန်များအတွက်ကင်းစားသုံးမှုလျော့ကျလာ (P = 0.048), မဟုတ် Sha တိရိစ္ဆာန်များ (P = 0.210; သင်္ဘောသဖန်း။ 5b) (LgA တုံ့ပြန်လှုပ်ရှား effecting ခြင်းမရှိဘဲ, P = 0.641; Sha, P = 0.664) ။ တိရိစ္ဆာန်များဆိုးရွားလာခဲ့သည်နှင့် Non-ဆိုးရွားလာခဲ့သည်သို့အုပ်စုဖွဲ့အခါအရေးကြီးတက်ကြွနှာခေါင်း Poke အပေါ် L-DOPA ၏ differential ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုအစား Sha နှင့် LgA (ဆိုးရွားလာခဲ့သည်တိရစ္ဆာန်များ၏ပိုမိုကြံ့ခိုင်ခဲ့ P = 0.005; Non-ဆိုးရွားလာခဲ့သည်တိရစ္ဆာန်များ, P = 0.421; သင်္ဘောသဖန်း။ 5c), L-DOPA လျှော့ချကြောင်းညွှန်ပြကင်းစားသုံးမှုဦးစားမယ့်အစားမူးယစ်ဆေးသုံးစွဲမှုထိခိုက်ဆိုးရွားလာခဲ့သည် se နှုန်း, ရက်ပေါင်းကျော် (စားသုံးမှုကုသမှု× (နေ့က 1) အပြန်အလှန်တီထွင်ထားတဲ့အပြန်အလှန်: F(1,51) = 0.562, P = 0.457; ဒါပေမယ့်ကုသမှု (နေ့က 5) အပြန်အလှန်×စားသုံးမှု: F(1,51) = 4.091, P = 0.048) ။ အရေးကြီးတာကအဲဒီတိုက်ပွဲတွေအရှိန်မြင့်လာနှင့် Non-ဆိုးရွားလာခဲ့သည် Sub-လူဦးရေများအကြားခြားနားချက်များအဖြစ်စူးရှခြင်းနှင့်နာတာရှည်အုပ်ချုပ် L-DOPA ၏ de-မြင့်တက်ဆိုးကျိုးများလည်း (Self-အုပ်ချုပ်ရေးအားလုံးခြောက်နာရီအနှံ့ကြည့်ရှုလေ့လာကြသည်နောက်ဆက်တွဲပုံ။ 10) ။ အတူတူကဤတွေ့ရှိချက်က L-DOPA, phasic dopamine လွှတ်ပေးရန်သူတို့ရဲ့ကင်းစားသုံးမှုမြင့်လာသည်ဟုတိရိစ္ဆာန်များအတွက်လျော့နည်းစေကြောင်းသရုပ်ပြနှင့် dopamine ရှေ့ပြေး၏ထပ်ခါတလဲလဲအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ restoring, dopamine မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးတင်းမာမှုမောင်းလျော့နည်းသွားကြောင်းသက်သေအထောက်အထားပေး, ဒီတင်းမာမှုကာကွယ်ပေးသည်နှင့်နောက်ကြောင်းပြန်။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာကျနော်တို့မူးယစ်ဆေးဝါးမှီခိုများအတွက်ဖြစ်ရပ်ဆန်းကြောင့်မော်ဒယ်များအဓိကရောဂါရှာဖွေသတ်မှတ်ထားမူးယစ်ဆေးစားသုံးမှု၏တင်းမာမှုစဉ်အတွင်း VMs နှင့် DLS အတွက် phasic dopamine လွှတ်ပေးရန်စုံစမ်းစစ်ဆေး21,23။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်ကြောင့်တင်းမာမှုသိသာစွာတင်းမာမှုနှုန်းဆက်နွယ်နေကြောင်းအဆိုပါ VMs အတွက် dopamine အတွက်လျှော့နှင့်တကွ, VMs နှင့် DLS နှစ်ဦးစလုံးအတွက် dopamine အချက်ပြယုတ်လျော့နှင့်ဆက်စပ်သည်ကိုသရုပ်ပြပါ။ နှိုင်းယှဉ်အပြောင်းအလဲများကိုကြွက်များတွင်တူညီသော regimen သုံးပြီးယခင်အလုပ်အတွက်လက်ရှိလေ့လာမှုမှာလုပ်သူများ dopamine အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိကြသည်မဟုတ်သကဲ့သို့ဤအကျိုးသက်ရောက်မှု phasic dopamine များအတွက်ရွေးချယ်ဖြစ်ပေါ်လာသော27 Non-လူ့မျောက်ဝံများတွင်သို့မဟုတ်ဆက်စပ် Self-အုပ်ချုပ်ရေး Paradigm32,33။ ကိုကင်းမှလျှော့ sensitivity ကိုနှင့်ဆက်စပ်သော (ထိုနောက်ဆုံး Self-အုပ်ချုပ်ရေး session တစ်ခုကနေ 18 နာရီနှင့်ခုနစ်ရက်ပတ်လုံးအကြားစမ်းသပ်ပြီး) မူးယစ်ဆုတ်ခွာကာလအတွင်းလျော့ချ phasic dopamine function ကို၏အစီရင်ခံစာများအရေအတွက်ရှိခဲ့သည်34-37။ ကျနော်တို့ Sha နှင့် LgA ကြွက်အကြားကင်းဖို့ dopamine တုံ့ပြန်မှု (များတွင်အလားတူလျှော့ချရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာနေစဉ်နောက်ဆက်တွဲပုံ။ 5aNon-ဆက်ပြောပါတယ်ကင်းဖို့ neurochemical တုံ့ပြန်မှု regimen အပြန်အလှန်×မျှစားသုံးမှုဆိုးရွားလာခဲ့သည်နှင့်မသောသူတို့ကိုအ (ကြောင်းကြွက်အကြားကွဲပြားခြားနားသောမကကဲ့သို့), ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုတင်းမာမှုလျှော့ချဖို့ဆိုင်တဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမပြုခဲ့: F(1,34) = 1.964 P = 0.170; နောက်ဆက်တွဲပုံ။ 5a) ။ အလားတူပင်ဆက်ပြောပါတယ်ကင်းပြီးနောက် 90 စက္ကန့်အထိလုပ်သူများ dopamine အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်အထွတ်အထိပ်အပြောင်းအလဲယူဆရမှုကြောင့်ကိုကင်းများ၏ pharmacological လုပ်ရပ်များငှါ, Pre-ဆိုးရွားလာခဲ့သည်အကြားကွာခြားခဲ့ပါဘူးနှင့်အတူတူပင်တိရိစ္ဆာန်များ (အတွင်းပြည်နယ်ဆိုးရွားလာခဲ့သည်နောက်ဆက်တွဲပုံ။ 8) ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှု၏တင်းမာမှုလျှော့ချခန့်မှန်းထားတဲ့လေ့လာတွေ့ရှိကြောင်း dopamine ဂီယာ၏တစ်ခုတည်းသောရှုထောင့်ကိုချက်ချင်းအဓိကအားမူးယစ်ဆက်စပ်တွေကိုတစ် conditional တုံ့ပြန်မှုဖြစ်သောတက်ကြွစွာနှာခေါင်း Poke, အောက်ပါဖြစ်ပွားခဲ့သည့် phasic တုံ့ပြန်ခဲ့9,11,13။ ကြောင်းစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုယာယီဟောကိန်းထုတ်ဖြစ်သကဲ့သို့ဆုလာဘ်-related လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်ရူးနှမ်းအဆိုပါ VMs အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်လျော့ကျဘယ်မှာပုံမှန်သင်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်၏ဆင်တူဖြစ်သော၎င်းတို့၏မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုဆိုးရွားလာခဲ့သည်ကြောင်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက်လျော့ဒါက neurochemical တုံ့ပြန်မှု,38,39။ သို့သော် Self-အုပ်ချုပ်မှုကာလအတွင်း dopamine လွှတ်ရာကို attenuation ရှည်လျားထူထောင်မူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေ၏ပိုင်ဆိုင်ပြီးနောက်အရေးပေါ်သင်ယူမှုများအတွက်မျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်ဟုထက်သင်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်အများကြီးနောက်ပိုင်းတွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်၎င်းတို့၏မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုမြင့်လာမတိရိစ္ဆာန်များအတွက် phasic dopamine လွှတ်ရာကို attenuation သည်ဤတိရိစ္ဆာန်များ asymptotic ခွဲခြားဆက်ဆံမှုဆာပအပြုအမူပြသော်လည်းရာအရပျယူမထားဘူး။
မကျြနှာကိုတနျဖိုးမှာမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအဖြစ်ကျဆင်းနေ dopamine လွှတ်ပေးရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာတွေ့ရှိချက်စွဲအတော်ကြာခေတ်ပြိုင်သီအိုရီများနှင့်အတူလေးသာမှုမှာဖြစ်ပေါ်လာဖြစ်စဉ်များ။ မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်မက်လုံးပေးာင်းဖြစ်စဉ်များကိုအာရုံစိုက်သီအိုရီမူးယစ်ဆေးနှင့် cue ထိတွေ့မှုတစ်ခုထိခိုက်တုံ့ပြန်မှု mediates ကြောင်းအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများဖို့ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှုအပေါ်မှာ VMs dopamine စနစ်၏တိုးပွားလာ reactivity ကို postulate40LgA ပြီးနောက်အထူးကြံ့ခိုင်ကြောင်း, တစ်ဦးဖြစ်ရပ်ဆန်း41။ မူးယစ်ဆေးစွဲထဲမှာထစ်အငေါ့သင်ယူမှုနှင့်အလေ့အထဖွဲ့စည်းခြင်း၏အခန်းကဏ္ဍကိုအပေါ် Conceptual အဆိုပါ DLS အတွက်အချက်ပြထွန်းသစ်စ dopamine ပို. ပို. မူးယစ်ဆေးရှာထိန်းချုပ်ယူဆကြောင်းအကြံပြု1,14,16။ ထိုမှတပါး, စွဲလမ်း၏ထင်ရှားတဲ့ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်များအထူးသစွဲလမ်းဆီသို့ဦးတည်နေတဲ့မောင်းနှင်အားအဖြစ်မူးယစ်ဆက်စပ်တွေကိုတိုးမြှင် dopamine အချက်ပြ ဆက်စပ်. အ42,43။ ပြောင်းပြန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက် Dackis နှင့်ရွှေတို့ကအဆိုပြုထားသော, စွဲလမ်း၏ dopamine တွေပျက်စီးမှုအယူအဆတွေနဲ့ပိုပြီးတသမတ်တည်းဖြစ်ပေါ်လာ44နှင့်ဆက်စပ်ပြိုင်ဘက်-ဖြစ်စဉ်ကိုသီအိုရီ21 ကြောင်းဆုလာဘ်-related ဖြစ်စဉ်များ၏မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု-သွေးဆောင်ဖိနှိပ်မှုကိုအလေးပေး။ ထိုသို့သောဖိနှိပ်မှုမူးယစ်ဆေးမူးယစ်တစ်ဦးစားပေးအဆင့်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏အစားထိုး Self-စည်းမျဉ်းဖြစ်ပေါ်စေဖို့တွေးဆထားသည်21။ အထူးသလူသားများနှင့်တိရိစ္ဆာန်များတိုးလာတုံ့ပြန်အတူကင်းလျှော့ချယူနစ်ဆေးများများအတွက်လျော်ကြေးပေး45,46။ ဤလုပ်ငန်းစဉ် VMs အတွက် dopamine ဂီယာအားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်8 နှင့်အကျိုးဆက်, (dopamine အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်ဥပမာ) dopamine ဂီယာလျှော့ချမူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုနှုန်းအတွက်တိုး elicits28,29။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သ LgA စဉ်အတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိကြောင်း dopamine အချက်ပြအတွင်းလျှော့ချရေးမူးယစ်၏ဦးစားပေးအဆင့်တွင်အောင်မြင်ရန်မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှု၏အစားထိုး upregulation လှုံ့ဆော်စေနိုင်သည်။ ဒီအယူအဆ၏ထောက်ခံမှုမှာ VMs အတွက် dopamine ၏လျှော့ချရေးအရှိဆုံးမူးယစ်ဆည်းပူးနေပိုမိုတင်းမာမှုပြကြောင်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက်အသံထွက်ခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့်ကျနော်တို့ dopamine ဂီယာပြန်လည်တင်းမာမှု attenuate မယ်လို့နှီးနှောလေ၏။ အမှန်စင်စစ် L-DOPA အုပ်ချုပ်ရေးကာကွယ်ပေးနိုင်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစားသုံးမှု၏တင်းမာမှုနောက်ပြန်ဆုတ်နှစ်ဦးစလုံးမှာထိရောက်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ အထူးသ, မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအပေါ် L-DOPA ၏သက်ရောက်မှုကြောင့်နောက်ခံ neuroadaptation တားဆီးမအကြံပြုခြင်း, ကုသမှု၏အောက်ပါရပ်စဲမခံနိုင်ဘဲခဲ့ပါဘူး။ ထို့ကြောင့်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာကြောင့်တင်းမာမှုမူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေစဉ်အတွင်း phasic dopamine အတွက်ကျဆင်းခြင်းမှတဆင့်ထင်ရှားသောဖြစ်စဉ်ကိုကကမကထပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဖော်ပြသည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်, psychostimulant အလွဲသုံးစားမှု၏လက်တွေ့ကုသမှု L-DOPA ၏အသုံးပြုမှုများအတွက်မကြာသေးမီကလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေ၏သေးငယ်တဲ့အရေအတွက်အချို့ကိုအလားအလာ, ဒါပေမယ့်ခြုံငုံရောနှောရလဒ်များရှိခဲ့ပါတယ်တဲ့မဟာဗျူဟာ mechanistic သတင်းအချက်အလက်များသည်47။ လျှော့ချ L-DOPA abstinence ထုတ်လုပ်မရှိဘဲမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဆိုးရွားလာခဲ့သည်ကတည်းကအထူးသကျနော်တို့ကအမူအကျင့်ကုထုံးအစီအစဉ်များကိုဝင်ရောက်စဉ်စွဲသူတို့ရဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုထိန်းချုပ်တစ်ဒီဂရီပြန်လည်ခွင့်ပြုထိခိုက်မှု-လျှော့ချရေးချဉ်းကပ်မှုနှင့်အထူးသဖြင့်များအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သင့်တော်ပါတယ်အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ယေဘုယျအားကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်ထိန်းအကွပ်မဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမှအပန်းဖြေထံမှပြောင်းကုန်ပြီ mediates ရာအလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးမူးယစ်ဆေး access ကိုစဉ်အတွင်းရာအရပ်ကိုကြာကြောင်း phasic dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက်လျှော့ထုတ်ဖေါ်။
300g နှင့် 400g အကြားအလေးချိန်ချားလ်စ်မြစ် (Hollister,, CA, USA) မှအရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီး Wistar ကြွက်တစ်ဦးချင်းသျောနှင့် 12-ဇအလင်း / 12-ဇမှောင်မိုက်သံသရာအပေါ်ထားရှိမည်ခဲ့ကြသည် (0700 မှာပေါ်ထွန်း) အစားအစာတွေနဲ့ထိန်းချုပ်ထားအပူချိန်နှင့်စိုထိုင်းဆနှင့် ရေရရှိနိုင်သည့်ကြော်ငြာ libitum ။ အားလုံးတိရိစ္ဆာန်အသုံးပြုမှုတက္ကသိုလ်ဝါရှင်တန်၏ Institutional တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုကော်မတီကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်နှင့်ခွဲစိတ်ခန်းသုံးလုပျထုံးလုပျနညျး aseptic အခြေအနေများအောက်တွင်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ voltammetry စမ်းသပ်ချက်တိရိစ္ဆာန်များ 50 များအတွက် 29, ထိုစမ်းသပ်ချက်တစ်လျှောက်လုံးပြွန် patency ထိန်းသိမ်းထားအနည်းဆုံးမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုအလုပ်လုပ်တဲ့နှင့် histologically လျှပ်ကူးပစ္စည်းခဲ့များနှင့်အမူအကျင့်စံနှုန်းများ (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) လွန်ရာ၏, ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူ။ အဆိုပါ pharmacological စမ်းသပ်မှုများအတွက်ပြွန် implantation ခံယူကြောင်း 28 ကြွက်၏ 32, သွေးကြောသွင်းပြွန် patency ထိန်းသိမ်းထားခြင်းနှင့်လေ့လာမှုအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ တိရစ္ဆာန်များ Sha Pre-စမ်းသပ်လေ့ကျင့်ရေးနေစဉ်အတွင်း၎င်းတို့၏ Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှုနှုန်းအပေါ်မှာအခြေခံစမ်းသပ်အုပ်စုများသို့ counterbalanced ခဲ့ကြသည်။ နမူနာအရွယ်အစားယခင်မြေားကိုအစီရင်ခံသူတို့အားဆင်တူ13.
ကြွက်, isoflurane နှင့်အတူ anesthetized တစ် stereotaxic ဘောင်ထဲမှာထည့်ထားသည့် nonsteroidal Anti-inflammatory carprofen (အရေပြားအောက်ဆုံး5mg / kg) နှင့်အတူအုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့တစ်ခု isothermal pad ပါအပေါ်ထားရှိခဲ့ကြသည်။ ဦးရေပြား, အရက်နှင့် betadine နှင့်အတူ swabbed lidocaine (0.5 / ကီလိုဂရမ် mg) နှင့် bupivacaine (0.5 mg / kg) ၏အရောအနှောတွေနဲ့ချိုး, နှင့် cranium ဖော်ထုတ် incised ခဲ့သည်။ Bregma မှ 1.2-မီလီမီတာ anterior, 3.1-မီလီမီတာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်နှင့် 4.8-မီလီမီတာ ventral (ပေါက်တွေဟာ cranium အတွက်တူးခဲ့ကြခြင်းနှင့်အီရတ်တွင် mater အဆိုပါ DLS ၏ပစ်မှတ်ထားဘို့ရှင်းလင်းခဲ့သည်48) နှင့်နျူကလိယ) Bregma ဖို့ VMs (1.3-မီလီမီတာ anterior, 1.3-မီလီမီတာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်နှင့် 7.2-မီလီမီတာ ventral ၏အမာခံ accumbens ။ In-အိမ်သူအိမ်သားကိုဖန်ဆင်းတစ်ခုမှာ Carbon-fiber microelectrode25 အဆိုပါ VMs နှင့် DLS ၌အခြားသောအတွက်နေရာချထားခဲ့ကာ Ag / AgCl ရည်ညွှန်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းဟာ forebrain ၏သီးခြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုထဲထညျ့ခဲ့သညျ။ တိရစ္ဆာန်များ၏မတူညီသောအစုတွင်, cannulas ကိုလမျးညှနျ (26 gauge; ပလတ်စတစ်တစ်ခုမှာ, ရော့, VA သို့, အမေရိကန်နိုင်ငံ), တန်းတူအရှည်၏ "Dummy" cannulas အားဖြင့် occluded, အ VMs ပစ်မှတ်ထားမှမြန်မာနိုင်ငံသ implants ခဲ့ကြသည်။ electrodes များနှင့်လမ်းပြ cannula screw နှစ်ခုအားဖြင့်ဦးခေါင်းခွံမှကျောက်ချရပ်နား cranioplastic ဘိလပ်မြေနှင့်အတူလုံခြုံခဲ့ကြသည်။ ခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက်ကြွက်ရှည်-သရုပ်ဆောင်, nonsteroidal Anti-inflammatory carprofen နှင့်အတူအုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည် (5 အရေပြားအောက်ဆုံး / ကီလိုဂရမ် mg) နှင့်လူနာသည်အထိခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့တစ်ခု isothermal pad ပါအပေါ်တင်လိုက်တယ်။ အားလုံးတိရိစ္ဆာန်များတစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်အကြာတွင်သီးခြားခွဲစိတ်စဉ်အတွင်းသွေးကြောသွင်းပြွန်နှင့်အတူကိုထညျ့သှငျးခဲ့သညျ။
ကြွက်များကို isoflurane ဖြင့်ထုံဆေးဖြင့်ကုသမှုမပေးသောအပြင် Steroids Non-inflammatory carprofen (၅ မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်၊ အရေပြားအောက်) နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုထိန်းသိမ်းရန် isothermal pad တစ်ခုတွင်ထည့်ထားသည်။ ပြွန်စုပ်စက်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ပြွန်ပြွန်များကိုအပြင်ဘက်အချင်း ၀.၆ မီလီမီတာရှိသော silastic tubing ဖြင့်တည်ဆောက်ထားပြီး“ hub” တစ်ခု (အဆုံးသတ်သည်။ သွေးကြောသွင်းခြင်းအထိရှည်သည်။ Plastics One, VA, USA) နှင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ပြွန်များကိုခန္ဓာကိုယ်၏အရှေ့ဘက်သို့ပခုံးများအကြားနောက်ကျော၌ခွဲစိတ်ခြင်းဖြင့်အရေပြားအောက်ဆုံးကိုတွန်းတင်ကာပြွန်၏အနီးဆုံးအဆုံးအနီးရှိဆီလီကွန်ရော်ဘာပုတီးဖြင့်ကူညီသည့်ညာဘက်ဂျူဘင်သွေးကြောထဲသို့ကျောက်ချရပ်နားသည်။ ပြွန်၏အကောင်းဆုံးနေရာကိုအနုတ်လက္ခဏာဖိအားဖြင့်သွေးထဲသို့သွင်းခြင်းဖြင့်စစ်ဆေးခဲ့သည်။ ထို့နောက်ဗဟိုချက်ပတ်ပတ်လည်ရှိတစ်သျှူးများနှင့်ကပ်ထားသည့် Teflon ကွက်တစ်ကွက်ဖြင့်လုံခြုံမှုရှိစေရန်နှင့်ခွဲစိတ်မှုများကိုပိတ်လိုက်ပြီးအချက်အချာကိုကြွက်၏ကျောဘက်မှထုတ်ပေးသည်။ ထို့နောက်ပြွန်ကို heparin solution (5 U / ml saline) ဖြင့်ဆေးကြောပြီး polyvinylpyrolidone (PVP) နှင့် heparin (0.6 U / ml) ၏ viscous solution ဖြင့်ဖြည့်တင်းခဲ့သည်။ ပြွန်အချက်အချာကို polyethylene tubing တို။ crimped အပိုင်းအစတစ်ခုဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားပြီး PVP ဖြေရှင်းချက်သည်ပြွန်ထဲတွင်ရှိနေပြီး patency ကိုသေချာစေရန်ဖြစ်သည်။ ခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက်ကြွက်များကိုအနည်းဆုံးငါးရက်ပြန်လည်ထူထောင်ခွင့်ပေးခဲ့သည်။
self-အုပ်ချုပ်ရေးအစည်းအဝေးများ 0900 နှင့် 1700 နာရီအကြားကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ ကြွက်ကပ်လျက်ပြားပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးနှစ်ခုနှာခေါင်း-Poke တုံ့ပြန်မှု devices တွေကိုတပ်ဆင်ထားသည် modular အော်ပရေတာအခန်းထဲက (Med Associates မှ, VT, အမေရိကန်နိုင်ငံ) (ဘက်ပေါင်းစုံ cue အလင်းအိမ်နှင့်အတူဆိပ်ကမ်းကို) တွင် Self-စီမံခန့်ခွဲကိုကင်း (Sigma, စိန့်လူးဝစ်, MO ကို, USA) မှလေ့လာသင်ယူ တူထရံ, တအိမ်အလင်းနှင့်စပီကာသန့်စင်သော-သေံနှင့်အဖြူ-ဆူညံသံလှုံ့ဆော်မှုများကို။ အော်ပရေတာအခန်းထဲကအသံ-attenuated ပြင်အခန်းထဲကအတွင်းသျောခဲ့သည်။ (3-4 လအရွယ်) ကြွက် FI20 အားဖြည့်အချိန်ဇယားကိုတခုတခုအပေါ်မှာအော်ပရေတာတုံ့ပြန်မှုအောက်ပါကင်းရရှိရန်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ တက်ကြွစွာဆိပ်ကမ်း၌နှာခေါင်း-Poke (ဘေးထွက်တိရိစ္ဆာန်များအကြား counterbalanced) ကိုကင်း၏ချက်ချင်းသွေးကြောသွင်းပြုတ်ရည်ထဲမှာရလဒ် (0.5 အကြောင်းကိုတဆယ်စက္ကန့်ကျော် / ကီလိုဂရမ် mg) အနေနဲ့အော်ဒီယိုပုံရိပ်ယောင်လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခု 20-ဒုတိယတင်ဆက်မှုနှင့်အတူတွဲပါ (နှာခေါင်းအတွင်းရှိအလင်း၏ illumination ဆိပ်ကမ်းနှင့်သေံပြီးမှ; အေးစက်လှုံ့ဆော်မှု, CS) ။ CS တင်ဆက်မှုစဉ်အတွင်းတစ် 20-ဒုတိယအကြိမ်ထွက်နှာခေါင်း Poke နောက်ထပ်မူးယစ်ဆေးပြုတ်ရည်သို့မဟုတ်အခြားပရိုဂရမ်အကျိုးဆက်များကိုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါဘူးထားတဲ့ကာလအတွင်းချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။ အဲဒီ session ကာလအတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးရရှိနိုင်မှုအိမ်တော်ကိုအလင်း၏အဖြူရောင်ဆူညံသံများနှင့် illumination အားဖြင့်အရိပ်ကိုခဲ့သည်။ တုန့်ပြန်တိကျတဲ့အဘို့ကိုထိန်းချုပ်ရန်, ဒုတိယ (မလှုပ်မရှား) ဆိပ်ကမ်းနှာခေါင်း-Poke စောင့်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အားဖြည့်ဘယ်တော့မှခဲ့သည်။ လေ့လာမှုမှာပါဝင်နှစ်ခုအဆက်ဆက်အစည်းအဝေးများအပေါ် session တစ်ခုနှုန်းနဲ့ငါးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုတက်ကြွတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုစံနှုန်းနှင့်အတူ Pre-လေ့ကျင့်ရေးအစည်းအဝေးများအပြီးတွင်ကြွက်တစ်နေ့လျှင်တစ်နာရီအဘို့ကိုကင်းဖို့နေ့စဉ်အသုံးပြုခွင့်ပေးခဲ့သည် (တိုတောင်းလက်လှမ်း; Sha) တဦးတည်းတစ်ပတ်ပြီးတော့ခြောက်လ သုံးပတ် (တစ်ပတ်ကိုငါးရက်) သည် ဖြစ်. , တစ်နေ့လျှင်နာရီပေါင်း (LgA ရှည်လျားလက်လှမ်း) ။ နှစ်ခုမှငါးအစည်းအဝေးများအနေဖြင့်တိရစ္ဆာန်များအကြားကွဲပြားစံနှုန်းရောက်ရှိဖို့အစည်းအဝေးများ၏အရေအတွက်။ ယခင်ကအစီရင်ခံထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စုကနေအမူအကျင့်ရလဒ်များကို13 ရက်ပေါင်းတစ်ဦးတန်းတူအရေအတွက်သည်တစ်ဦး Sha regimen အောက်မှာလေ့ကျင့်သင်ကြားကြွက်မှ LgA ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးလျှက်ကြွက်များကနေအမူအကျင့် data တွေကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့အခြေခံအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
FI20 ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးသုံးခု Sha သို့မဟုတ် LgA ရက်သတ္တပတ်မှနောက်ဆက်တွဲ, ကြွက်၏အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင်တိုးတက်သော-အချိုးစမ်းသပ်ခြင်းခံယူ။ ဤရွေ့ကားအစည်းအဝေးများတိရိစ္ဆာန်များဤသင်ခန်းစာကိုလေ့လာဆွေးနွေးစဉ်အတွင်းကင်း၏အဆက်ဆက်တာဟာအဘို့အော်ပရေတာတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုတိုးပွားလာဖျော်ဖြေဖို့လိုအပ်ခဲ့ မှလွဲ. FI20 အစည်းအဝေးများမှတူညီခဲ့ကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုရုံးတင်စစ်ဆေးအပေါ်စစ်ဆင်ရေးလိုအပ်ချက် (T) 1.4 များ၏ဝိုင်း-Down integer ဖြစ်တဲ့အတွက်ခဲ့(T - 1) 1 လီဗာစာနယ်ဇင်း (ထိုဖြစ်ပါသည်, 1, 1, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 40, 56, 79, 111, 155, 217, 304, 426) မှာစတင်လီဗာပုံနှိပျ, ။ ဤလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်နောက်ဆုံးမှာတိရိစ္ဆာန်များတုံ့ပြန်ရပ်တန့်ကာ "ချိုးအချက်" ကိုရောက်ရှိနိုင်အောင်မြင့်မားတဲ့ဖြစ်လာသည်။ အဆိုပါချိုးအမှတ်စစ်ဆင်ရေးမတိုင်မီအဘယ်သူမျှမတာဟာရယူခဲ့ကြသည်ထားတဲ့ကာလအတွင်းတစ်ဦးသုံးဆယ်မိနစ်ကာလမှရရှိခဲ့တာဟာစုစုပေါင်းအရေအတွက်ကအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။
L-DOPA / Benserazide အုပ်ချုပ်ရေး
L-DOPA (L-3,4-dihydroxyphenylalanine) (Sigma, စိန့်လူးဝစ်, MO ကို, အမေရိကန်ကနေနှစ်ဦးစလုံး), L-DOPA ၏အရံပြိုကွဲလျော့ဖို့ Peripheral သရုပ်ဆောင် DOPA decarboxylase inhibitor Benserazide နှင့်အတူပေါင်းစပ်ပေးထားခဲ့သည်။ နှစ်ဦးစလုံးမူးယစ်ဆေးဝါးများဆားအတွက်ဖျက်သိမ်းနှင့် 1 ml / ကီလိုဂရမ်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်တစ်အသံအတိုးအကျယ်မှာသွေးကြောသွင်းထုံမွှန်းခဲ့ကြသည်။ L-DOPA 30, 0, 10 မှာကြိုတင် session တစ်ခုစတင်နိုင်ရန် 30 မိနစ်အုပ်ချုပ်ခွင့်, သို့မဟုတ် Benserazide မသက်ဆိုင်ဘဲမူလအုပ်ချုပ်မှ L-DOPA ထိုး၏ 90 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်မှာတသမတ်တည်းပေးထားခဲ့သည်သော်လည်း2/ ကီလိုဂရမ် MG ခဲ့သည်။ လေ့လာမှုများတစ်ဦးပထမဦးဆုံးအစု (ဆေးထိုးတုံ့ပြန်မှု) ခုနှစ်, ကြွက် (ကတစ်ခုတည်းနေ့၌ L-DOPA နဲ့ကုသခဲ့ကြသည်သဖန်းသီး။ 4) ။ မှ L-DOPA အညွှန်းများကိုအဘယ်သူမျှမဘယျလိုမှယေဘုယျစွမ်းဆောင်ရည်သို့မဟုတ်စေသော dyskinesia ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ထပ်ခါတလဲလဲ L-DOPA အုပ်ချုပ်ရေးအလားအလာဖွငျ့ဆိုးကျိုးများမှရှောင်ရှားရန်, ကြွက် "L-DOPA အစည်းအဝေးများ" အောက်ပါ L-DOPA ကုသမှုမပါဘဲလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ လေ့လာမှုများတစ်စက္ကန့်ထားမှာတော့တိရိစ္ဆာန်များကို (အထိနှစ်ပတ်အတွင်းတဲ့ကာလများအတွက်ကြိုတင်တစ်ခုချင်းစီကို Self-အုပ်ချုပ်ရေး session ကိုဤ L-DOPA နဲ့ကုသခဲ့ကြသည်သဖန်းသီး။ 5) ။ လေ့လာမှုများ၏တတိယအစုတွင်, ပြသကြောင်းကြွက် LgA စဉ်အတွင်းကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုဆိုးရွားလာခဲ့သည်, 25 အတွက်ဖျက်သိမ်းမှ L-DOPA ၏နှစ်နိုင်ငံအပြန်အလှန်ပြုတ်ရည်၏ဆိုးကျိုးများ (50-0.5 μgတစ်ဦးချင်းစီ hemisphere သို့ ACSF μl; 0.25 / မိနစ်μl; Sigma, စိန့် မူးယစ်ဆေး-ယူပြီးအပြုအမူအပေါ် VMs သို့လူးဝစ်, MO ကို, အမေရိကန်နိုင်ငံ) နှင့် ACSF ဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ ပြုတ်ရည်ရက်ပေါင်းတွင် Dummy cannula လမ်းညွှန် cannula ကျော်လွန် 33 မီလီမီတာ protruded တစ် 1.0-gauge ပြုတ်ရည် cannula ဖြင့်အစားထိုးခဲ့သည်။ ပြုတ်ရည်ကြိုတင် session တစ်ခုစတင်ဆယ်မိနစ်အားပေးခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါပြုတ်ရည်ပြီးနောက်, cannulas မူးယစ်ဆေးများပျံ့နှံ့မှုအတွက်ခွင့်ပြုဖယ်ရှားရေးမတိုင်မီနှစ်မိနစ်အဘို့အရာအရပျ၌ကနျြခဲ့သညျ။
စမ်းသပ်ဆဲအစည်းအဝေးများ (တစ်ပတ်ကိုနှစ်ခုအစည်းအဝေးများကာလအတွင်းဖျော်ဖြေအသံသွင်း) ကာလအတွင်းလျင်မြန်စွာ Scan ကိုသိသိ voltammetry အားဖြင့် dopamine ထောက်လှမ်းဘို့, နာတာရှည်ထဲထညျ့ကာဗွန်-ဖိုင်ဘာ microsensors တစ်ဦးသည် PC-မောင်းနှင်ဒေတာ-ဝယ်ယူခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုစနစ်နှင့်အတူ interfaced တစ်ဦးဦးခေါင်း-တပ်ဆင်ထား voltammetric အသံချဲ့စက်မှချိတ်ဆက်ခဲ့သည် (အမျိုးသားတူရိယာ, TX, အမေရိကန်နိုင်ငံ) ကိုစမ်းသပ်အခန်းထဲကအထက်တွင်တပ်ဆင်ထားခဲ့ကာလျှပ်စစ်ဆုံလည် (Med Associates မှ, VT, အမေရိကန်နိုင်ငံ) မှတဆင့်။ Voltammetric Scan ဖတ် 100 Hz တစ်နမူနာနှုန်းကိုအောင်မြင်ရန်တိုင်း 10 ms ထပ်ခါတလဲလဲခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးချင်းစီ voltammetric စကင်ဖတ်စစ်ဆေးစဉ်အတွင်း 0.4 V ကို / s ကို (1.3-ms စုစုပေါင်းစကင်ကိုတစ်ကြိမ်မှာ, ကာဗွန်-ဖိုင်ဘာလျှပ်ကူးပစ္စည်းမှာအလားအလာရှိသော linearly + 400 V ကို (anodic မောင်း) မှ Ag / AgCl နှိုင်းယှဉ် -8.5 V ကိုထံမှအပူတပြင်းခဲ့ပြီးနောက်ကျော (cathode မောင်း) ) နှင့် Scan ဖတ်အကြား -0.4 V ကိုမှာကျင်းပခဲ့တယ်။ dopamine သည့်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ၏မျက်နှာပြင်မှာလက်ရှိဖြစ်တဲ့အခါ, သူက dopamine-o-quinone ဖွဲ့စည်းရန်ဖို့ anodic မောင်းနေစဉ်အတွင်းဓါတ်တိုးနေသည် (အထွတ်အထိပ်တုံ့ပြန်မှုမှာခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် + 0.7 V ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိ) မှာတွေ့ရှိသည့် cathode မောင်း (အထွတ်အထိပ်တုံ့ပြန်မှုပြန် dopamine လျှော့ချသော ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် -0.3 V ကို) ။ အီလက်ထရွန်များ၏လူအများက flux လက်ရှိအဖြစ်ကိုတိုင်းနှင့်လျှပ်စစ်သုံးခံယူကြောင်းမော်လီကျူး၏နံပါတ်တိုက်ရိုက်အချိုးကျသည်။ 0.025 Hz - Voltammetric ဒေတာ 2,000 မှာ filtered တီးဝိုင်း-pass ဖြစ်ခဲ့သည်။ သည်အခြားတ္ထုများထံမှ dopamine ၏ resolution ကိုခွင့်ပြု, အ Analytics ၏ဓာတုလက်မှတ်ဝိသေသပေးချင်းစီစကင်ကိုမှရရှိသောနောက်ခံ-နုတ်ထားပါ, အချိန်-ဖြေရှင်းပြီးလက်ရှိ49။ Dopamine စံလေ့ကျင့်ရေး set ကို အသုံးပြု. chemometric ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအားဖြင့် voltammetric signal ကိုကနေခွဲထုတ်ခဲ့သည်25 နာတာရှည်ထဲထညျ့လျှပ်အားဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိလျှပ်စစ်စိတ်ကြွဆေး dopamine လွှတ်ပေးရန်အပျေါမှာအခြေခံပါတယ်။ Dopamine အာရုံစူးစိုက်မှုလျှပ်၏ပျမ်းမျှ Post-implantation sensitivity ကိုအပေါ်မှာအခြေခံခန့်မှန်းခဲ့သည်25။ ပျမ်းမျှအားဖြင့်အာရုံစူးစိုက်မှု၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမတိုင်မီက, ရှိသမျှဒေတာပျမ်းမျှအားဖြင့်အပြေးရုံးတင်စစ်ဆေးအတွင်း 5-အချက်နှင့်အတူပန်းခင်းလမ်းခဲ့ကြသည်။ dopamine များ၏အာရုံစူးစိုက်မှုစစ်ဆင်ရေးတုံ့ပြန်မှု (Post-တုံ့ပြန်မှု) သို့မဟုတ် CS ၏ Non-ဆက်ပြောပါတယ်တင်ဆက်မှုအောက်ပါခုနစ်ခုစက္ကန့်ကို (လေ့လာတွေ့ရှိ phasic signal ကို၏အနီးစပ်ဆုံးကြာချိန်) ကိုကျော်ပျမ်းမျှခံခဲ့ရခြင်းနှင့်ကြိုတင်အော်ပရေတာမှနှစ်ခုစက္ကန့်ကျော်ပျမ်းမျှအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ခဲ့သည် တုန့်ပြန် (အခြေခံ) ။ အဆိုပါ CS တဲ့ကာလအတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးဖြန့်ဝေခြင်းနှင့် cue အကြား The Associated အေးစက်နှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်ကိုရှောင်ရှားဖို့ဒုတိယနှင့်တတိယပတ်အတွင်းကောက်ယူတိုင်းမှတ်တမ်းတင်အစည်းအဝေးများ (နှစ်ကြိမ် 20 စက္ကန့်ချင်းစီအဘို့အ session တစ်ခုနှုန်း) စဉ်အတွင်း, ဒါပေမယ့်မရပထမဦးဆုံးအပတ်အတွင်း Non-ဆက်ပြောပါတယ်တင်ဆက်ခဲ့သည် ဘယ်မှာဒီအသင်းအဖွဲ့ယူဆရနေဆဲဖွံ့ဖြိုးဆဲခဲ့ပါတယ်။
တစ်ဦးချင်းစီလြှပျစစျအချက်ပြမှုများကို Self-အုပ်ချုပ်ရေး session ကိုဖြတ်ပြီးပျမ်းမျှခဲ့ကြသည်, ထို့နောက်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်ရက်သတ္တပတ်ကိုဖြတ်ပြီး, စာရင်းအင်းပါဝါတိုးမြှင့်ဖို့။ signals အချက်များအဖြစ်တုန့်ပြန်, ဦးနှောက်ဒေသ, ကိုကင်းစားသုံးမှုနှင့်ရက်သတ္တပတ်နှင့်အတူ multivariate ANOVAs သုံးပြီးနှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်။ လြှပျစစျဒေတာတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ဘို့, အမူအကျင့်ဒေတာကိုလည်းရက်သတ္တပတ်သို့ binned ခဲ့ကြသည်။ L-DOPA စမ်းသပ်ချက်အဘို့, တစ်ဦးကိုသက်ဆိုင်ရာမူးယစ်ဆေးကုသမှု (မျှကုသမှု, L-DOPA ထိုး, ဒါမှမဟုတ်မော်တော်ယာဉ်) ၏ (ရက်ဆက်တိုက်အပေါ်အုပ်ချုပ်လျှင်ရက်ပေါင်းဖြတ်ပြီးပျမ်းမျှ) အပြုအမူဆိုင်ရာအချက်အလက်များ, မူးယစ်ဆေးကုသမှု, လေ့ကျင့်ရေး regimen, ကိုကင်းစားသုံးမှုနှင့်အတူ multivariate ANOVAs သုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည် နှင့်အချက်များအဖြစ်ရက်သတ္တပတ်။ သိသာထင်ရှားသောအဓိကသက်ရောက်မှုသို့မဟုတ် interaction က၏အမှု၌, Post-hoc ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းကောက်ယူခဲ့ကြခြင်းနှင့် P တန်ဖိုးများမျိုးစုံစမ်းသပ်များအတွက် Holmes-Bonferroni ဆုံးမခြင်းနည်းလမ်းနှင့်အညီချိန်ညှိခဲ့ကြ50။ မြေကွက် Prism ကို (GraphPad Software များ,, La Jolla, CA, USA) ကို အသုံးပြု. လုပ်ခဲ့ကြသည်။ စာရင်းအင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း SPSS, ဗားရှင်း 17.0 (ချီကာဂို, IL, အမေရိကန်နိုင်ငံ) နှင့် Prism ကိုသုံးပြီးထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ ဒေတာကို parametric စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်သင့်လျော်သောဖြစ်ကြသည်။ အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့်စမ်းသပ်ချက်များအခြေအနေများမျက်စိကန်းဖျော်ဖြေမခံခဲ့ရပါ။
အသံဖမ်းဆိုဒ်များ Histological စိစစ်အတည်ပြု
လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်များပြီးစီးတွင်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အဖြစ် intraperitoneal ketamine ၏ဆေးထိုး (100 / ကီလိုဂရမ် mg) နှင့် xylazine (20 mg / kg) နဲ့ anesthetized ခဲ့ကြသည်။ လျှပ်ကူးပစ္စည်း implants နှင့်အတူတိရိစ္ဆာန်များအတွက်, မှတ်တမ်းတင်ခြင်းဆိုဒ်များ 300% -paraformaldehyde အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ဆားနှင့်အတူ perfusion transcardial ဖို့ကြိုတင်ကာလျှပ်တွေ့ရှိရပါသည် (4 V ကို) နဲ့မှတ်သားခဲ့ကြသည်။ ဦးနှောက်ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့် paraformaldehyde အတွက် Post-fixed နှစ်ဆယ်လေးနာရီအဘို့, ပြီးတော့လျှင်မြန်စွာတစ်ဦး cryostat (50-μm Coronal ကဏ္ဍများ, -20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) တွင်ခွဲတစ်ခု isopentane ရေချိုးအတွက်အေးခဲနှင့်များ၏ visualization အတွက်အကူအညီ cresyl ခရမ်းရောင်နှင့်အတူစွန်းခဲ့ကြ ခန္ဓာဗေဒဖွဲ့စည်းပုံနှင့်လျှပ်ကူးပစ္စည်း-သွေးဆောင်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်သို့မဟုတ်ပြုတ်ရည်ဆိုဒ်များ။
ကျနော်တို့အသုံးဝင်သောတုံ့ပြန်ချက်များအတွက်ဖြစ်သူ Scott Ng သည်-အီဗန်, Christina Akers Sanford, ချဒ် Zietz, နီကိုးလ် Murray နှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာထောက်ပံ့မှုဒံယလေသ Hadidi နှင့်မော်နီကာအာနိုးနဲ့ Jeremy Clark ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဤလုပ်ငန်းကိုဂျာမန်သုတေသနဖောင်ဒေးရှင်း (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) Grant က WI 3643 / 1-1 (iw), အရက်နှင့်ဆေးဝါးဌာန (PEMP) နှင့်ဝါရှင်တန်တက္ကသိုလ် (PEMP) ၏ Provost, နှင့်အမျိုးသား Institutes ကနေဆုကထောက်ခံခဲ့သည် ကနျြးမာရေး၏ T32-DA027858 (LMB), F32-DA033004 (PAG), P01-DA015916 (PEMP), R21-DA021793 (PEMP) နှင့် R01-DA027858 (PEMP) ပေးအပ်။
iw နှင့် PEMP သုတေသန, iw, LMB ဒီဇိုင်းနှင့် PAG သုတေသနဖျော်ဖြေနှင့် iw data တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ; iw နှင့် PEMP စက္ကူရေးသားခဲ့သည်။
1 ။ Everitt BJ, Robbins TW ။ မူးယစ်ဆေးစွဲများအတွက်အားဖြည့်များ၏အာရုံကြောစနစ်များ: လုပ်ရပ်များကနေအလေ့အထမှမလှူရန်။ သဘာဝတရားမှ neuroscience ။ 2005; 8: 1481-1489 ။ [PubMed]
2. Di Chiara, G, Bassareo V. ဆုလာဘ်စနစ်နှင့်စွဲ: dopamine ဘာလုပ်တယ်နှင့်မပါဘူး။ ဆေးဝါးဗေဒအတွက်လက်ရှိအမြင်။ 2007; 7: 69-76 ။ [PubMed]
3 ။ di Chiara G. အနျူကလိယ shell ကိုနှင့်အဓိက dopamine accumbens: အပြုအမူများနှင့်စွဲလမ်းအတွက် differential ကိုအခန်းကဏ္ဍကို။ အမူအကျင့်ကဦးနှောက်သုတေသန။ 2002; 137: 75-114 ။ [PubMed]
4 ။ Ito က R ကို, Dalley JW, Howes SR, Robbins TW, Everitt BJ ။ နျူကလီးယပ်အခြေအနေများ dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက် Dissociation ကိုကင်းတွေကိုတုန့်ပြန်နှင့်ကြွက်များအတွင်းကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူစဉ်အတွင်း core နဲ့ shell ကို accumbens ။ J ကို neuroscience ။ 2000; 20: 7489-7495 ။ [PubMed]
5 ။ Ito က R ကို, Dalley JW, Robbins TW, Everitt BJ ။ မူးယစ်ဆေးဝါး-ဆက်စပ် cue များ၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ကင်း-ရှာကြံအပြုအမူစဉ်အတွင်း dorsal striatum အတွက် Dopamine လွှတ်ပေးရန်။ neuroscience ၏ဂျာနယ်: အာရုံကြောသိပ္ပံများအတွက် Society ၏တရားဝင်ဂျာနယ်။ 2002; 22: 6247-6253 ။ [PubMed]
6 ။ di Chiara, G လူသားများအားဖြင့်စော်ကား Imperato အေမူးယစ်ဆေးဝါးဦးစားလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွေ့လျားကြွက်များ၏ mesolimbic စနစ် Synaptic dopamine ပြင်းအားတိုးမြှင့်။ အမေရိက၏အမရေိကနျပွညျထောငျစု၏သိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ၏တရားစွဲဆိုမှု။ 1988; 85: 5274-5278 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
7 ။ ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA, Bozarth MA ။ စွဲလမ်းတစ် psychomotor လှုံ့ဆော်သီအိုရီ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြန်လည်သုံးသပ်။ 1987; 94: 469-492 ။ [PubMed]
8 ။ ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA, et al ။ နျူကလိယအတွင်းအတက်အကျကြွက်များတွင်သွေးကြောသွင်းကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုကာလအတွင်း dopamine အာရုံစူးစိုက်မှု accumbens ။ Psychopharmacology ။ 1995; 120: 10-20 ။ [PubMed]
9 ။ Phillips က Pem, Stuber GD, Heien ML, Wightman RM, Carelli RM ။ Subsecond dopamine လွှတ်ပေးရေးကိုကင်းရှာအားပေးအားမြှောက်။ သဘာဝ။ 2003; 422: 614-618 ။ [PubMed]
10 ။ Stuber GD, Roitman MF, Phillips က Pem, Carelli RM, Wightman RM ။ ဆက်ပြောပါတယ်နှင့် noncontingent ကင်းအုပ်ချုပ်မှုကာလအတွင်းနျူကလိယ accumbens အတွက်အချက်ပြ Rapid dopamine ။ Neuropsychopharmacology ။ 2005; 30: 853-863 ။ [PubMed]
11 ။ Stuber GD, Wightman RM, Carelli RM ။ ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမျိုးသုဉ်းသည့်နျူကလိယ accumbens အတွက် function နှင့်ယာယီကွဲပြား dopaminergic အချက်ပြမှုများကိုဖော်ပြသည်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2005; 46: 661-669 ။ [PubMed]
12 ။ et al Owesson-White က, CA ။ ကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူများ၏အာရုံကြော encoding ကအဆိုပါ accumbens core နဲ့ shell ကိုအတွက် phasic dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်အတူတော့သည်ဖြစ်ပါတယ်။ EUR J ကို neuroscience ။ 2009; 30: 1117-1127 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
13 ။ Willuhn ငါ Burgeno LM, Everitt BJ, Phillips က Pem ။ ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်း၏တိုးတက်မှုစဉ်အတွင်း striatum အတွက် phasic dopamine အချက်ပြ၏ hierarchical စုဆောင်းမှု။ အမေရိက၏အမရေိကနျပွညျထောငျစု၏သိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ၏တရားစွဲဆိုမှု။ 2012; 109: 20703-20708 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
15 ။ Robbins TW, Everitt BJ ။ မူးယစ်ဆေးစွဲ: မကောင်းတဲ့အလေ့အထတက်ထည့်ပါ။ သဘာဝ။ 1999; 398: 567-570 ။ [PubMed]
16 ။ Berke JD, Hyman SE ။ စွဲ, dopamine နှင့်မှတ်ဉာဏ်၏မော်လီကျူးယန္တရားများ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2000; 25: 515-532 ။ [PubMed]
17 ။ Kalivas PW, Volkow ND ။ စွဲလမ်းမှု၏အာရုံကြောအခြေခံ: လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုရောဂါဗေဒ။ Psychiatry ၏အမေရိကန်ဂျာနယ်။ 2005; 162: 1403-1413 ။ [PubMed]
18. Porrino LJ, Smith HR, Nader MA, Beveridge TJ ။ ကိုကင်း၏ဆိုးကျိုးများ - ဆေးစွဲနေစဉ်ကာလအတွင်းပြောင်းလဲပစ်သောပစ်မှတ်တစ်ခု။ neuro-psychopharmacology & ဇီဝစိတ်ရောဂါကုသမှုတိုးတက်မှု။ 2007; 31: 1593-1600 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
19 ။ Deroche-Gamonet V ကို, ဘီးလင်း: D, Piazza PV ။ ကြွက်များတွင်စွဲတူသောအပြုအမူများအတွက်အထောက်အထား။ သိပ္ပံ။ 2004; 305: 1014-1017 ။ [PubMed]
20 ။ Vanderschuren LJ, Everitt BJ ။ မူးယစ်ဆေးရှာအချိန်ကြာမြင့်စွာကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောဖြစ်လာသည်။ သိပ္ပံ။ 2004; 305: 1017-1019 ။ [PubMed]
21 ။ Ahmed က SH, Koob gf ။ အလယ်အလတ်ကနေအလွန်အကျွံမူးယစ်စားသုံးမှုမှအကူးအပြောင်း: hedonic set ကိုအမှတ်အတွက်ပြောင်းလဲမှု။ သိပ္ပံ။ 1998; 282: 298-300 ။ [PubMed]
22 ။ Jonkman S က, Pelloux Y ကို, Everitt BJ ။ မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုလုံလောက်ပေမယ့်အေးစက်တိုးချဲ့ Self-အုပ်ချုပ်ရေးရှာ compulsive ကိုကင်းများပေါ်ပေါက်ရေးတို့အတွက်မလိုအပ်ပါဘူး။ Neuropsychopharmacology ။ 2012; 37: 1612-1619 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
23 ။ DSM-IV-TR ။ စိတ်ရောဂါ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းကို manual ။ vol ။ IV ။ အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအစည်းအရုံး; 2000 ။
24 ။ et al Zernig, G, ။ ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏တင်းမာမှုရှင်းပြ: မော်ဒယ်များနှင့်သင့်လျော်သောတိရိစ္ဆာန်ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုများ။ ဆေးဝါးဗေဒ။ 2007; 80: 65-119 ။ [PubMed]
25 ။ Clark က JJ, et al ။ တိရိစ္ဆာန်များပြုမူအတွက် longitudinal, subsecond dopamine ထောက်လှမ်းဘို့နာတာရှည် microsensors ။ သဘာဝတရားနည်းလမ်းများ။ 2010; 7: 126-129 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
26 ။ နုံနဲ့ကင်း-အတွေ့အကြုံရှိကြွက်များအတွင်းကိုကင်းများ၏ pharmacokinetics အတွက်ပန် HT, Menacherry S က, တရားမျှတမှု JB ။ , Jr ကွာခြားချက်များ။ neurochemistry ၏ဂျာနယ်။ 1991; 56: 1299-1306 ။ [PubMed]
27 ။ Ahmed က SH, Lin က D:, Koob gf, Parsons LH ။ ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးစက်လှေကားပြောင်းလဲကင်း-သွေးဆောင်နျူကလိယအပေါ်မူတည်ပါဘူး dopamine အဆင့်ဆင့် accumbens ။ neurochemistry ၏ဂျာနယ်။ 2003; 86: 102-113 ။ [PubMed]
28 ။ de ကျေး H ကို, ပညာရှိ RA ။ အဆိုပါ dopamine အဲဒီ receptor blocker pimozide နှင့်အတူကြွက်များတွင်ကင်းအားဖြည့်များ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်း, ဒါပေမယ့်မ noradrenergic blockers phentolamine သို့မဟုတ် phenoxybenzamine အတူ။ စိတ်ပညာ၏ကနေဒါဂျာနယ်။ 1977; 31: 195-203 ။ [PubMed]
29 ။ Ettenberg တစ်ဦးက, Pettit HO, Bloom FE, Koob gf ။ ဘိန်းဖြူများနှင့်ကြွက်များအတွင်းကိုကင်းသွေးကြောသွင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး: သီးခြားအာရုံကြောစနစ်များအားဖြင့်စေ့စပ်ဖြန်ဖြေ။ Psychopharmacology ။ 1982; 78: 204-209 ။ [PubMed]
30 ။ Robledo P ကို, Maldonado-လိုပက်ဇ R ကို, Koob gf ။ ကိုကင်းများ၏အကြိုးဂုဏ်သတ္တိများအတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine receptors ၏အခန်းက္ပ။ သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ၏ရာဇဝင်။ 1992; 654: 509-512 ။ [PubMed]
31 ။ et al Wightman RM ။ ကြွက် striatum အတွက် dopamine လျတ်နှင့်လွှာမှ၏ real-time စရိုက်လက္ခဏာတွေ။ neuroscience ။ 1988; 25: 513-523 ။ [PubMed]
32 ။ Bradberry CW ။ အပန်းဖြေကိုကင်းသုံးစွဲခြင်းတစ်ဦး nonhuman မျောက်မော်ဒယ်အတွက် acute နှင့်နာတာရှည် dopamine ဒိုင်းနမစ်။ J ကို neuroscience ။ 2000; 20: 7109-7115 ။ [PubMed]
33 ။ Kirkland ဟင်နရီ P ကို, Davis က M ကို, Howell ll ။ မျောက်တွေကို၌ Vivo striatal dopamine neurochemistry နှင့် acoustic ထိတ်လန့်အပေါ်ကန့်သတ်ခြင်းနှင့်တိုးချဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်အခြေအနေများအောက်တွင်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးသမိုင်း၏ဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology ။ 2009; 205: 237-247 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
34 ။ Mateo Y ကို, မရှိခြင်း CM, မော်ဂန်: D, ရောဘတ်, DC, ဂျုံးစ် SR ။ ကိုကင်းမူးရူး Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ဆင်းရဲချို့တဲ့အောက်ပါကင်းဖို့ dopamine terminal ကို function ကိုနှင့်အာရုံမခံစားနိုင်သောလျှော့ချ။ Neuropsychopharmacology ။ 2005; 30: 1455-1463 ။ [PubMed]
35 ။ ကူးတို့ MJ, et al ။ differential ကို dopamine Transporter blockers များ၏အာနိသင်အပေါ်သက်ရောက်မှု, ဖြန့်ချိခြင်း, methylphenidate: ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး pharmacodynamic သည်းခံစိတ်ထုတ်လုပ်သည်။ Neuropsychopharmacology ။ 2012; 37: 1708-1716 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
36 ။ et al Calipari ES ။ Methylphenidate နှင့်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးကွဲပြား dopamine terminal ကိုပြောင်းလဲထုတ်လုပ်ရန်။ စွဲဇီဝဗေဒ။ 2012 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
37 ။ Calipari ES, ကူးတို့ MJ, Zimmer BA, ရောဘတ်, DC, ဂျုံးစ် SR ။ ကင်းစားသုံးမှု၏ယာယီတွေရဲ့စံနမူနာကိုတု Dopamine Transporter မှာကင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုများအသိမြှ vs စာနာထောက်ထားရေးကိုဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ Neuropsychopharmacology ။ 2013; 38 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
38 ။ Schultz W ကဒါယန်း P ကို, မွန်တဂူ PR စနစ်။ ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်တစ်ခုအာရုံကြောအလွှာဟာ။ သိပ္ပံ။ 1997; 275: 1593-1599 ။ [PubMed]
39 ။ Clark က JJ, Collins AL, Sanford, CA, Phillips က Pem ။ Pavlovian မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုများ Dopamine encoding ကတိုးချဲ့လေ့ကျင့်ရေးနှင့်အတူမှေးမှိန်။ J ကို neuroscience ။ 2013; 33: 3526-3532 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
40 ။ ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC ။ မူးယစ်ဆေးတဏှာ၏အာရုံကြောအခြေခံ: စွဲတစ်ခုမက်လုံးပေး-sensitive သီအိုရီ။ ဦးနှောက်သုတေသန။ ဦးနှောက်သုတေသနပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ 1993; 18: 247-291 ။ [PubMed]
41 ။ et al Ferrario CR ။ အာရုံကြောနှင့်ထိန်းချုပ်ကနေဆိုးရွားလာခဲ့သည်ကိုကင်းသုံးစွဲမှုအကူးအပြောင်းနဲ့ဆက်စပ်အပြုအမူ plasticity ။ ဟားဗတ်။ 2005; 58: 751-759 ။ [PubMed]
42 ။ Redish အေဒီ။ ကော်လံကလွဲနေတယ်သွားပြီကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းစဉ်သည်အဖြစ်စွဲလမ်း။ သိပ္ပံ။ 2004; 306: 1944-1947 ။ [PubMed]
43 ။ Keramati M ကတိုက်နယ်တွေအကြောင်းမူးယစ်ဆေး-ပြန်ပေးဆွဲ dopamine ကနေပေါ်ထွက်လာစွဲအတွက် Gutkin ခ Imbalanced ဆုံးဖြတ်ချက်အဆင့်ဆင့်။ PloS တဦးတည်း။ 2013; 8: e61489 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
44 ။ Dackis, CA, ရွှေက MS ။ ကိုကင်းစွဲအတွက်နယူးသဘောတရားများ: အ dopamine တွေပျက်စီးမှုအယူအဆ။ neuroscience နှင့် biobehavioral ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ 1985; 9: 469-477 ။ [PubMed]
45 ။ et al Lynch WJ ။ ကျပန်းရုံးတင်စစ်ဆေး: လူ့ကင်းသည်အသုံးပြုသူများအတွက်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး၏စည်းမျဉ်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်တစ်ဦးကပါရာဒိုင်း။ Psychopharmacology ။ 2006; 185: 306-314 ။ [PubMed]
46 ။ Pickens R ကို, ကြွက်များတွင် Thompson က T. ကင်း-အားဖြည့်အပြုအမူ: အားဖြည့်ပြင်းအားနှင့်ပုံသေ-အချိုးအရွယ်အစားဆိုးကျိုးများ။ ဆေးဝါးဗေဒနှင့်စမ်းသပ်ဆဲဟော်မုန်းများ၏ဂျာနယ်။ 1968; 161: 122-129 ။ [PubMed]
47 ။ Mariani JJ, Levin FR ။ ကိုကင်းမှီခို၏ Psychostimulant ကုသမှု။ မြောက်အမေရိက၏စိတ်ရောဂါဆေးခန်း။ 2012; 35: 425-439 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]